Hiriira mormii qeerroo godina adda-addaa keessati hara’a godhamaa olee – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHiriira mormii qeerroo godina adda-addaa keessati hara’a godhamaa olee
Ameerikaan addunyaa kaanarrratti sababni isheen sodaatamtee kabajamtee jiraattuuf hagam mirga dhala namaa eeguuf tattaaffattuuyyuu
Humna waraanaa Niikulara biyya takka daaraa godhu waan qabduuf.kanaaf addunyaan ishee sodaata.
Oromoonis akka saba tokkootti kabajamee sodaatamee kan jiraatu waan WBO qabuuf.gaafa Ameerikaan Niikulara ishee dhabde gadhee hundatu itti roorrisee ol aantummaa qabachuuf fiiga.gaafa WBO meesshaa hiikkatee taa’e Oromoorratti kan hin duulle hin jiru.
Kabajnis jaalallis jaalattanis jibbitanis gaafa WBO qabnu qofaaf.
Ameen Jedhi.አሜን በል!!
“Jilbeeffannee isin kadhanne” jedhe Qeerroon AMBO.
Dhimmi Lixa Oromiyaa otoo daldaaltoti eddu harka keessa hin naqatiin, daddaffiin dhaabbachuu qaba. dhiigdi ilma oromoo tokkoo lola’uu hin qabu.
Haayyoo fi Abboon, Akkoo fi Akkaakayyuun, Qeeroo fi qarreen, magaallii fi baadiyyaan oromomiyaa hundi yeroo ammaa Nagaa, bilisummaa fi Misooma barbaadu. qabsoo bara dheeraa kana keessatti maatii maaqatu jireenyaa fi jiruu akka itti dhabe, adda hin baane, lubbuu nama meeqatu akka ittiwareegame, sichi golee oromiyaa hundaa baramuuf deema. meeqatu qabsoo kana keessatti achi buuteen isaa akka dhabame qoratamuutti jira.
Qabsa’ota falmaa irratti wareegaman sirnaan maatiin isaanii hin beekne.
akkaataa itti qabsa’amuu fi mala qabsootu jijjirame malee, gaaffiin qabsoon taasifamaafii ture hundi deebii argate jechuu miti. qabsoo itti aanuuf garuu daandiin qalloon wareegama guddaan banamtee jirti. daandii gara dirree qabsoo karaa nagaatti nama geessuu dha. daandiin kun deebi’ee cufamnaan ammas deebifnee banuuf kaffaltii amma yoonaa kaffalleen ol nama gaafata. kanaaf daandii wareegaman banamee jiru cufuuf yaaluun seera miti.
Akka oromootti gaaffii waloo qabnuuf waloon dhaabbannee deebii itti argachuu qabna. kanaaf ammoo carraan ni jira. bakka carraan jirutti carraa wal dhoowwuun sirrii miti.
jaarmiyaaleen siyaasaa oromoos ta’ee mootummaan akkaataa itti waliif galametu jiru. walii galtee kana ammoo qaamota walii galetu beekas. hojiitti hiikuu kan qabus qaamuma kana.
kun otoo kanaan jiruu uummati fayyaalessi dhimmicha hubannoo gahaa ittii hin qabne gidduu galee rakkachuu hin qabu. shiraa fi walitti maluun aadaa oromoo keessa hin jiru. garuu ergifataan dhaalaa jirra.
Waanti amma Lixa oromiyaatti ta’aa jiru gabaa argachaa jira fakkaata. dhimmichi qaama lama harka jira. mootummaa fi warra dhimmichatti abboomame. gabaa kana keessaa otoo daldaaltoonni biroo seenanii gatii guddaan bitatanii qaalii hin godhiin dhaabbachuu qaba.
falli isaa salphaadha.
Qaamni mootummaa fi warri Asmaraatti walii galan bakka tokko taa’anii midiyaadhaan uummataaf ibsa kennuu qabu. hoogganaan Finfinnee keessa nagaan otoo taa’aa jiru, kuun Lixa oromiyaatti waanti bosona keessatti rakkatuuf sababumti tokko hin jiru. Polisiin oromiyaa otoo finfinnee fi bakka simannaatti hooggantoota jaarmiyaa sisyaasaa nageenya eegaa jiru, bosonatti ammoo wal ajjeesisaniif tasa jiraachuu hin malle. yoo waliif abboomamuun rakkoo ta’e, midiyaadhaan uummataaf ibsuun nagaa fida.
ammas uumma oromoo nagaa barbaaduuf, jilbeeffannee nagaa aafinnuuf!
Hiriira mormii qeerroo godina Gujii Magaalaa Adoolaa
Gullisoo-Hiriira Deeggarsa WBO
#Giincii-Walirraa hafuun dhara!!
#Gindhiir Wal Ta’iitti Simannaa Jila ABO f taasifama jiru
Sodaa hin qabnu!!!!!!!!!!!!!
ከፍተኛ የውግያ ልምድ ያላቸው ከኤርትራ የተመለሱት የዴምሕት ወታደሮች ለክፉም ለደጉም ከትግራይ ልዩ ሃይል ጋር ተቀላቅለው የትግራይን ጠላት በአይነ ቁራኛ እየተከታተሉ ነው፡፡
Kun diinumma moo firumma dha …??
Yeroo ilmaan habashoota humna isaani cimsaa jiranitti keenya moo hiikkachisuf maratti.
Waa’ee hidhannoo hiikkachuu WBO ilaalchisee dura kan iyyaa ture ESAT dha. Itti aansee miseensotaa fi harcaatuu OPDO dha. ESAT kan eenyuu akka ta’e, eenyurratti maaliif duulaa akka jiru otop beekanii kan maqaaf qomoo Oromoo jedhaman waa’ee hidhannoo hiikkachuu WBO maaliif gargaarsa warra esat akka gofhan namaa hingalu. Haala deemaa jiru akkaataa ESAT itti gabaasu ilaalaa👇
#TIM~ WBO Bosona Oromiyaa
Dhaloota qubee roorroon barnootarraa adda kuttee Bosonatti naqxe kanaan dinatu itti gargaarama jechuun cubbu guddaa keessa nama hingalchuu? As keessaa tokko barataa Yunivarsiitii turuusaa ani qaamanan beeka. Shanan kanaatu kuma 5 f qoricha!
Video: Raajii Guddataa
TIM News-Please share!!!
Haasaa akka malee nama gaddisiisu. Kunoo rakkoo deemaa jiruuf ka’umsi guddaan kana.
Sirna Simannaa ABO Lixa Shaggar Ona Calliyaa Magaalaa Geedootti Gaggeeffamerratti Miseensonni KFO,Obb.Dajanee Xaafaa Fi Obb. Olbaanaa Leellisaas Argamuun – https://t.co/t6LsCLcK1e pic.twitter.com/p8NsiDTpCp
— Kichuu (@kichuu24) October 29, 2018
Kun magaalaa Dambi_Dolloo WBO’n Qawwee Hinhikkaatu! “Wal kabajuu baannaan itti fufa” jedhaa jira qeerroon – https://t.co/S8yXG6evzl pic.twitter.com/l2o0GZRo49
Sirna Simannaa ABO Lixa Shaggar Ona Calliyaa Magaalaa Geedootti Gaggeeffamerratti Miseensonni KFO,Obb.Dajanee Xaafaa Fi Obb. Olbaanaa Leellisaas Argamuun
Mediaan odoo waldhibdee kana afarsuu baatani ,garee lameenu walitti fidan lameenu waan isaan jedhan ummani dhagahe gaariidha.